window server မှာ isa မသုံးပဲ . . — MYSTERY ZILLION
window server မှာ isa မသုံးပဲ . .
March 2010 edited December 2010 in Windows Server
window 2003 server မှာ isa မသုံးပဲ . .Kerio WinRoute Firewall ကို သုံးလို့အဆင်ပြေမလားဆိုတာ . .သိတဲ့သူတွေပြောပေးကြပါအုန်း . .
ကျွန်တော့မှာ server လည်း ထိုင်ချင် . .isa လည်း မတက်၊ Linux လည်း မသိနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ပါ . .
အခုဒီဟာလေးက . .နည်းနည်း လုပ်ရတာ လွယ်မလားလို့ . .
အကြံဉာဏ်ပေးကြပါအုန်းဗျာ . . . .
server ထိုင်ရတာ ပိုက်ဆံကုန်တယ်... ကျွန်တော်ကတော့ အရင်တုန်း ISA ကြိုက်တယ်ဗျာ....အခုလည်းကြိုက်တုန်းပါ... ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ Router တွေကကောင်းလွန်းပါတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ Server မထိုင်တော့ဘူး... ISA ကိုပြောတာပါ...
WinRoute ကို ကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်ရင်လည်းကောင်းတာပဲ... server ကိုတော့ဘယ်မှီမလဲဗျ...
loonthway wrote: »
loonthway က ISA server မထိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ . .အခုဘာကိုသုံးနေလဲဗျ . .နောက်ပီး . . ISA ကို ကြိုက်တဲ့သမားဆိုတော့ . .ISA ရဲ့ အဓိက အားသာချက်လေးတွေကို ပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျ. . .
ဆိုင်မှာက . .MPT 1M ယူထားတာတောင် . .စက်တစ်လုံးကနေ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ရင် . .pfingo တို့လို့ဆော့၀ဲလ်မျိုးကို သုံးဖို့တောင်မစဉ်းစားရဲတော့ဘူး . ..
အဲ့ဒါကြောင့် အခုကွန်ပျူတာတစ်လုံးထပ်ဆင်ပီးတော့ . . server ထိုင်မလို့ . .အရင်သုံးထားတာက router နဲ့ပဲ . . .
နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင် ေ၀မျှကြပါအုန်း . .
ဟယ်ရို . . ကြည့်ရတာ ဘယ်သူမှ Kerio WinRoute Firewall ကိုမသုံးကြဘူးနဲ့တူတယ် . .:frown:
ISA မကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ... ISA ထိုင်လိုက်တော့ ဆာဗာ ဖိုးကုန်ပြီဗျာ... သူက အင်တာနက်ကွန်နက်ရှုင်ကို မြန်ဖို့ support လုပ်ပေးမယ်... အဲဒါကလည်း website ပိုင်းလောက်ပဲ... VZO, Pfingo, အဲဒါတွေအတွက်ကတော့ ထူးထူးခြားခြားကြီး ပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး...1Mb ယူထားတယ်ဆိုရင် load balance ကောင်းကောင်းနိုင်တဲ့ router ရယ်... နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ traffic အလိုအလျှောက် ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ switch ရယ်ဆို လိုင်းက တော်ရုံနဲကျမှမဟုတ်ဘူး... ISP ကကောင်တွေရဲ့ လက်ယားမှူကလွဲရင်ပေါ့...(မေတ္တာတုံးတဲ့ကောင်တွေ ) ကျွန်တော်က သိပ်မရှင်းပြတတ်ဘူး... ဘာအားသာလဲဆိုတာက
သီအိုရီသာ ရှာဖတ်တော့ဗျာ... wiki ကိုအားကိုးပေါ့... Kerio Winroute လို ကောင်မျိုးကတစ်ပုံကြီးဗျ... သူက မြန်အောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး...ကွာခြားချက် အထူးအခြားကြီးရှိလာမှမဟုတ်ဘူး...
ဒါပေမယ့် manually အရမ်း setting ပိုင်းကို နိုင်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့... အခု server ထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့လည်း အားပေးရတော့မှာပေါ့...လုပ်ဗျာ...
server ဆိုတဲ့အတိုင်း... ဖြစ်ရင်တော့နည်းနည်းလက်၀င်တာပေါ့... ဒါလောက်ပဲ ကူညီနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
ISA ကကွန်နက်ရှင် နည်းနည်းပိုမြန်လာတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကွန်နက်ရှင်ကို ထိန်းပေးတယ်။ ဥပမာ အများဆုံးသုံးတယ့် G talk ပေါ့ဗျာ။ ကွန် အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာတောင် မပြုတ်သွားအောင်ထိန်းပေးနိုင်တယ်။ တခြား web site ပိုင်း gmail ပိုင်းတွေကိုလဲ catch အထဲက နေ ပြန်ထိန်းထားပေးတာ။ ပြီးတော့ ကွန် လုံး၀ကျပြီးစက္ကန့်၄၀ ကျော်ကျော်လောက်အထိ မကျအောင်ထိန်းပေးတယ်။ အဲ ရိုက်လိုက်တယ့်စာရောက်မရောက်တော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ မပြုတ်အောင်ထိန်းပေးထားတာကိုပဲပြောတာ။ :D ။ ISA က ပြသနာတစ်ခုခုကြောင့် ပျက်သွား၇င်လဲ CD ထည့်ပြီး repair လုပ်လို့ရတယ်။ antivirus ကတော့ kaspa 6.0 for server ကိုသုံးတယ်။ အရင်ကတော့ router တစ်မျိုးသုံးဘူးတယ်။ stable ဖြစ်တယ့်အပိုင်းမှာ ISA က အများကြီးပိုကောင်းနေတယ်။ ကျွန်တော် တခြား ဆာဗာ အမျိုးအစားလဲ မသုံးဖူးဘူး။ ဒါလေးက ကျွန်တော်သိသလောက်ဖြေပေးတာပါ။
ကျွန်နော်ကတော့ Linux & Windows နှစ်ခုစလုံးအတွက် အဆင်ပြေတဲ့..Squid Pxoy လေးကိုဘဲသုံးတယ်..
ပြီးတော့ သူက Open Source ဖြစ်တဲ့အတွက် Configuration ကို ကိုယ်တိုင် ပိုပြီးပြည့်စုံအောင် configura လုပ် လုပ်ရတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ linux squid server ကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ ။
ဒါပေမဲ့ Fiber (username password) ကြီးက server ကိုပါဝါဖွင့်
server login ၀င်မှ internet access ရတယ်ဗျို့။ server ပါဝါဖွင့်
တာနဲ့client တွေ internet access ရအောင်နည်းလမ်းလေး
လုပ်ပါအုံးဗျာ ။ login မ၀င်ချင်ဘူး
Kerio Winroute firewall ကကောင်းပါတယ် ( ကှန်တော် ကြိုက်လို့ထင်တယ် ) ။
အရင်က ကှန်တော် 6.2 ကနေစသုံးပါတယ် ။ 7.2.2 မှာ kerio ကိုတော်တော်ကြိုက်သွားပါတယ် ။
ကှန်တော် ကြိုက်သွားတာ ကတော့ bandwidth management နဲ့ Monitorig Active Host ပဲ ။
Bandwidth Management ကတော့ အရင် version တွေမှာ overall ကို package size ပေါ်မှာမူတည်ပြီး
ချိန်ပြီးတော့ထိန်းရတယ်။ ဒီ ip ကိုbandwidth ဘယ်လောက်ပဲပေးမယ် ။ ဟို Ip ကိုbandwidth ဘယ်လောက်ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ထိန်းလို့မရဘူးဗျ ။7.2.2 version အထက်မှာဆိုရပါပြီး ။
Ip address နဲ့ လည်းထိန်းလို့ရတယ်။ ။ ဥပမာဗျာ 192.168.1.100 ကို 50KBps ပဲပေးမယ် ။ ဆိုရင် web browing ပဲသုံးသုံး download ပဲဆွဲဆွဲ ကြိုက်တာလုပ် အဲ့ဒီအိုင်ပီက 50KBps ထက်မကျော်ဘူး ။ bandwidth ထိန်းတဲ့နေရာမှာလည်း တိကျတယ်။ သူ့အိုင်ပီအလိုက်ကို bandwidth ကြိုက်သလောက်ပေးပြီးတော့ထိန်းလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ Web browsing ကိုမထိန်းချင်ဘူး ။ media streaming ကိုပဲသက်သက်ထိန်းချင်လား ရတယ်။ large file download ကိုပဲထိန်းချင်လား ။
Monitoring active host ကတော့ အရင် ကတည်းကပါပါတယ် ။ ကှန်တော် သိသလောက်တော့
ISA နဲ့ Squid မှာ Default အနေနဲ့ Real Time Monitoring မပါဘူးထင်တယ် ။ သူ့မှာက default
အနေနဲ့ပါတယ်။ Web Interface လဲပါတယ် ။အခုကှန်တော်သုံးနေတာက Kerio Control 7.2.3
( Kerio Winroute Firewall က 7.0 ရောက်တော့ Kerio Control ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ် )
Kerio control က Window အတွက်ရော linux အတွက်ရော သူ့ OS ( Linux Base နဲ့ Kerio OS )
ကှန်တော်သုံးတာတော့ Kerio OS ပါ ။ ပထမ က တော့ window ပေါ်မှာသုံးတော့ virus ကြောက်ရတာနဲ့
Window server error တက် မှာကြောက်တာနဲ့ ရင်လေးရတယ် ။ အခု Kerio Control OS ကိုသုံးတာ
အဆင်ပြေတယ် . Installation Time က OS တင်ရင် ၁ဝ မိနစ်ထက်ပိုမကြာဘူး ။ Configuration ချပြီးတာနဲ့
Configuration ကို export လုပ်ထားလိုက်တယ်ဗျာ။ Server Hardware ပြသနာတခုခုကြောင့်ဆိုတာနဲ့ တခြားစက်မှာ OS ကိုတင်လိုက်တယ် configuration file ko import လုပ်လိုက်တယ်။ down time က မိနစ် ၂ဝထက်ပိုမကြာဘူး ။ virus ရန်လည်းဝေးတာပေါ့ဗျာ ။ Server မှာ Ip address configuration တခုပဲပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ configuration ကတော့ client browser ကနေတဆင့်လုပ်ရတာပါ ။ ကှန်တော်တော့ kerio Control ကိုကြိုက်တယ် ။ crack version လိုချင်ရင်တော့ ကှန်တော့်ဆီကိုအီးမေးပို့ပေးပေါ့ဗျာ ။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတာနဲကချက်ချင်းပို့ပေးပါ့မယ်။ window အတွက်ကတော့ သုံးဖူးတယ် ။ linux အတွက်ကတော့ crack ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့်တခါမှမစမ်းဖူးဘူး ။ OS လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပေးပါ့မယ် ။
ကှန်တော့ မေးကတော့ [email protected] ပါ ။ ကှန်တော့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း သိသလောက်ရေးလိုက်တာပါ ။ အမှားပါတယ်ထင်ရင်တော့ ထင်တဲ့စာကြောင်းကိုကျော်ဖတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ ။